Uphononongo lweSemalt: Yintoni kwaye isebenza njani?
Wonke ishishini elincinci lifuna ukwandisa ukugcwala kwewebhusayithi yabo. Kwishishini elikwi-Intanethi, sisiseko sempumelelo yabo.
Umbuzo omkhulu uthi "Njani?"
Ujika phi ufuna iinkonzo zasimahla kunye nezohlawulelwayo ze-SEO ezisebenza nyani?
Ewe, isixhobo esinye esinokuthi siphucule kakhulu ukusebenza kwendawo yakho kunye nokuhamba kwezithuthi nguSemalt.
Ke kolu hlaziyo lukaSemalt, siya kukunceda ufumanise ukuba kufanelekile na.
Nantsi into esiza kuyigubungela:
Uvandlakanyo lwabathengi beSemalt
Uyisebenzisa kanjani i-Semalt
Apha eSemalt, sinesikhephe sezixhobo ze-SEO (uPhando lweNjini yokuKhangela).
Sisemishini yokwenza amashishini akwi-intanethi aphumelele, kungekuphela nge-SEO, kodwa kunye neenkonzo ezinjengokuphuhliswa kwewebhu, ukuhlalutya kunye nemveliso yevidiyo. (Okungakumbi kwiinkonzo zethu kamva).
Kodwa asiyiyo nayiphi na inkampani ye-SEO. Siyabathanda ubuntu obabandakanyekileyo kolu shishino.
Kwaye ungadibana namalungu eqela lethu (kunye ne-turtle) , ukusuka kuphuhliso lweshishini ukuya kwimpumelelo yabathengi kwizibonelelo zabantu. Ungayibona eyakho indima yomntu ngamnye, funda izinto zethu zokuzonwabisa, kwaye ke ungasinika umnxeba nangaliphi na ixesha lemini okanye ebusuku. (Singakwazi ukuthetha isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, iTurkey nezinye iilwimi ezininzi!)
Elinye iqela leqela esonwabileyo ngalo: iTurbo.
Xa safudukela kwiiofisi zethu ezintsha ngo-2014, safumana iTurbo kwimbiza endala yeentyatyambo. Umnikazi weofisi wangaphambili usandula ukumshiya apho.
Owu, kuya kufuneka sikhankanye ukuba iTurbo ngofudo.
Ukususela ngalo mzuzu, samthabathela kuye njengezilwanyana zasekhaya kunye ne-mascot yenkampani. Ngoku uhlala kwi-aquarium enkulu kwindawo yethu e-Ukraine.
Ke angenza ntoni amalungu eqela lethu ? Sonke simalunga ne-SEO.
UkuKhangela kweNjini yokuKhangela kuxa uphumeza iinkqubo ezithile ukwenza iwebhusayithi yakho ibonakale iphakamileyo kwiziphumo zokukhangela. I-SEO iyinto yonke ephilayo, ngokuchasene nokufumana iintengiso ezihlawulwayo.
Ke ukuba unayo iwebhusayithi kwaye ufuna ukonyusa ukugcwala, ii-SEO kufuneka zibe yinxalenye yesicwangciso sakho.
Indawo yokusebenza ye-SEO ejikeleze ukukholisa eyona injini yokukhangela ithandwa kakhulu nguGoogle. Kwaye iGoogle ine-algorithm enoluhlu lweziphumo zophando ngokusekelwe kwinto ekholelwa ukuba umphandi uyijongile.
Kwinqanaba elisisiseko, unokuhlulahlula i-SEO ibe ngamacandelo amabini: kwiphepha le-SEO kunye ne-SEO kwiphepha elingaphandle.
Kwiphepha le-SEO libhekisa kwizinto eziphantsi kolawulo lwakho kwiwebhusayithi yakho. Oku kubandakanya isantya sendawo, ukusebenza kwekhowudi, umgangatho womxholo, kunye nolwakhiwo kunye nokuyilwa kwendawo yakho. Zonke ezi zinto zibaluleke kakhulu kwintsebenzo yakho ye-SEO.
I-SEO engaphandle kwephepha ibandakanya izinto ezinje nge-backlinks ezivela kwezinye iisayithi, ukuthunyelwa kwimidiya yoluntu, kunye namanye amaqhinga okuthengisa ngaphandle kwewebhusayithi yakho. Ezona zinto zibalulekileyo zephepha le-SEO zibandakanya inani lee-backlinks kunye nomgangatho wazo backlinks.
Kulungile kuwe ukuba ezinye iindawo ezikumgangatho uphakamileyo zishishini lakho zidibanisa indawo yakho. UGoogle uyakuthanda oku kwaye uya kubeka kwinqanaba lakho iwebhusayithi ephezulu.
Nangona kunjalo, eyona nto ibaluleke kakhulu onokuyenza kukubonelela ngomxholo ekumgangatho ophezulu rhoqo. I-SEO ngumdlalo wexesha elide.
Uluhlu olukhethiweyo lukaGoogle luya kuza ukuba ugxile ekudaleni umxholo omangalisayo. Abantu baya kunxibelelana nendawo yakho kwaye bathumele abanye apho ukuba ukhupha umxholo omkhulu.
I-Semalt ibonelela nge-suite epheleleyo yeenkonzo ze-SEO, zombini ezihlawulelwayo kunye zasimahla. Ngokusisiseko, sinokuyifumana indawo yakho kwaye isebenza kwaye ichume, zonke ziphantsi kophahla olunye.
Nazi iinkonzo esizinikezelayo:
Iplatifomu yenkuthazo ezenzekelayo
Masikhe sigqibe ngokufutshane kwinkonzo nganye. Oku kuya kukunika umbono olungcono wokuba ungazuza ntoni.
Iphakheji yethu ye-AutoSEO yinto esiyibiza ngokuba "yindlu epheleleyo" yamashishini akwe-Intanethi. Ngale phakheji, uya:
Iingxelo zokuhlaziywa kwewebhu
Uyila iwebhusayithi yakho eyoyikekayo. Sikwenzela iGoogle.
Usebenzisa into ebizwa ngokuba yi “white hat” Iindlela ze-SEO, unokuphucula i-traffic yakho uqala nge- $ 0.99 kuphela.
Abanini bamashishini amancinci
Ngaphezulu kweenkonzo ezisisiseko ze-SEO-njengokusebenza ngaphakathi, ukulungiswa kweempazamo, ukubhala umxholo, umvuzo wekhonkco, kunye nenkxaso-ufumana okuninzi nge-FullSEO.
Iqela lethu le-SEO liya kuphuhlisa isicwangciso esenzelwe wena kunye neshishini lakho. Sijonga kwinto oyifunayo ekumgangatho ophezulu kwaye emva koko uphumeze isicwangciso sokuphucula iwebhusayithi yakho.
I-FullSEO ilungele oku:
NgoSemalt Webtytics, unga:
Yenza indawo yakho ifumaneke ngakumbi
Gcina iithebhu kwiwebhusayithi ezikhuphisana nazo
Fumana ingxelo ebanzi yewebhusayithi
Ukuze wazi indlela yokuphucula iwebhusayithi yakho, kufuneka uqale ubone iziqwenga ezingekho. Ngohlalutyo lwethu, unokufumana amagama aphambili aphakanyisiweyo, ufumanise ukuba abantu bajonge ntoni, kwaye ubhengeze iimfihlo zokhuphiswano lwakho.
Ukuhlaziywa kwewebhu ye-Semalt kulungele:
Abanini bamashishini abancinci
Siza kude siyokwakha iwebhusayithi yakho. Sakha iiwebhusayithi ezityebileyo nezizingcaphephe ezamkela iindwendwe kwaye zikhombe kwicala elifanelekileyo.
Inkangeleko kunye nesantya sewebhusayithi yakho kuchaphazela izinga lakho lokugoba kunye nexesha lokujonga iphepha. Kwaye oko kuyakuchaphazela i-SEO yakho.
Yiyo loo nto yonke iwebhusayithi esiyenzayo ikhawuleza, kulula ukuyisebenzisa, kwaye yenziwe i-SEO ngokupheleleyo.
Ividiyo iyaziwa kwaye iya ithandwa ngakumbi. Yiyo loo nto udinga iividiyo zobuchule ukwenza indawo yakho ime ngaphandle.
Ayisiyiyo kuphela iividiyo ekonwabisa kwaye yazise abathengi bakho, kodwa bayigcina kwindawo yakho ixesha elide. Kwaye kulungile kwi-SEO simo sakho.
Ngenkonzo yethu yokuvelisa ividiyo, siya kukunceda:
Sibonelela nangetalente yelizwi elichule!
Imveliso yethu yevidiyo ilungele:
Ukunyaniseka, sinako ukuqhubeka nokuqhubeka malunga neemveliso kunye neenkonzo zethu. Kungenxa yokuba siyayithanda into esiyenzayo.
Kodwa kunokuba luncedo ukuva ukuba abathengi bethu bangaphambili bathini ngathi. Nazi ezinye zeempendulo zethu zabathengi ezithandekayo ...
"Sisebenzise uSemalt ... ukuba iwebhusayithi ephezulu kakhulu kwiminyaka emithathu edlulileyo, utshilo uKristian weMALO CLINIC. "... Ukuba ufuna ukuphuculwa kwinqanaba, ke uSemalt lolona cebiso lubalaseleyo."
"Enye yezona nkampani zibalaseleyo ze-SEO ekufuneka nditsho," utsho uWojtek waseMsofas Limited. “Ndizame iinkampani ezininzi ze-SEO kodwa andifumani nto endiyifunayo. Kodwa ngoSemalt ekugqibeleni ndiyifumene. ... Bayayiqonda into efunekayo kwiwebhusayithi yam kwaye bakwenzile oko ukwenza ngcono ishishini lam kwaye yandonyusa ingeniso yam. "
"Sasonwabile ngumphathi wethu uVolodymyr Skyba ngazo zonke iifowuni ezilandelayo, ii-imeyile, neengxelo zaphakathi evekini ngolwimi lwethu," utshilo uSpanish-Isithethi saseJapan saseBaja Properties. “Siliqela lokuqala kwimixube yamagama aphambili kushishino lwethu kwaye isikhokelo sele singqongqoza ii-imeyile zethu kangangeenyanga ezininzi ngoku. Ngaphandle kokuba ngumphathi wewebhu ngokwam, ndisazibuza ukuba ingaba yintoni imilingo abayenzayo ukwenza le nto yenzeke. ”
Ngokucacileyo, abathengi bethu bayasithanda. Kwaye sibathanda emva!
Nje ukuba ufike emhlabeni kwiphepha likaSemalt , into yokuqala oya kuyibona sisixhobo sasimahla esibonisa umgangatho wesizinda sakho. Ngenisa nje i-URL yakho kwaye ubethe "Qala ngoku."
Emva kokwenza oko, uyakuyalelwa ukuba ubhalise. Senze le nkqubo ngokulula ngokulula-faka idilesi yakho ye-imeyile, yenza iphasiwedi, kwaye usitshele igama lakho.
Uya kuba nakho ukufumana ingxelo yakho, kunye nohlaziyo oluziswe ngqo kwibhokisi yakho engenayo.
Emva kokurejista, uya kusiwa kwidashboard yakho. Apha ungabona uluhlu lwakho, ufumane uhlalutyo lwewebhusayithi, kwaye wenze iprojekthi entsha.
Ngasekunene, uza kubona amagama aphambili kunye nodidi lwakho kuyo nganye. Unokongeza amagama abalulekileyo kwaye ubone ingxelo epheleleyo yamagama ahlalutyo.
Ngokundwendwela iwebhusayithi yeWebhusayithi yokuhlaziya ngezantsi ngasekhohlo, ungayibona eyakho:
Ukujonga iphepha kwansuku zonke kundwendwe ngalunye
Ixesha lemihla ngemihla kwisiza
Ulwazi oluneenkcukacha lwe-SEO
Isantya kunye nokusebenziseka
Idatha yeseva kunye nokhuseleko
Iingcebiso malunga nendlela onokuyiphucula ngayo indawo yakho
Unokuya nakwithebhu yeZiko leNgxelo ukwenza iprojekthi kunye nengxelo ehambelana nayo.
Kwingxelo yakho, unokongeza amacebo okucoca, uluhlu, uluhlu kunye nomhla womhla. Kwaye, unokucwangcisa indlela kunye nengxelo yakho eya kuthi iveliswe ngayo kwaye ithunyelwe kuwe.
Konke-kuyo yonke, unokufumana ulwazi oluninzi oluluncedo kakhulu kunye nezibalo ngesixhobo samahhala.
Kwaye, ngokuqinisekileyo, unganyusa ukuze ufumane uncedo ngakumbi ngewebhusayithi yakho. Ngokwenza njalo, sinokukunceda ukhwele kwiziphumo ze-injini yokukhangela, enkosi kubuchule bethu, izixhobo, ulwazi, kunye namalungu eqela eliphambili.
Olu hlaziyo lweSemalt lukubonisa ukuba zingaluncedo njani ezi nkonzo zasimahla kunye nezohlawulelwayo ze-SEO zingabakho kwiwebhusayithi yakho. Kwaye ukuba ngcono indawo ekumgangatho wakho, kokukhona ishishini liya kukwazi ukuvelisa.
Ke ukuba ujonge ukuphucula i-SEO kunye namava akho endwendwe, sikufumene kuzo zonke ii-angles.
Emva kokufumana ingxelo yakho yasimahla simahla, ungabhalisela, kwaye siya kuba sinxibelelana kwangoko!